Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa, ayaa xilka ka qaaday nin sheegtay waxbarasho been abuur ah – MUDUGPOST
You are here: Home Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa, ayaa xilka ka qaaday nin sheegtay waxbarasho been abuur ah
Posted on July 25, 2017 by MUDUGPOST | 0 Comments
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa, ayaa shalay xilka ka qaaday xoghayihii joogtada ahaa ee wasaaradda arrimaha gudaha Yaxye Cali Ibraahim, oo muddo xilkaas hayey.
Wuxuu ku eedeeyay xoghayaha shaqada laga joojiyay inuu ku xadgudubka jaranjarada hanaanka shaqada iyo u hogaansami la’aanta amarada xubnaha sare ee Wasaaradda ee ku aadan fulinta qorshaha siyaasadda wasaaradda iyo cabashooyin ka imaanaya shaqaalaha ee ku aadan maamul xumada, cadaalad-darada iyo wada-shaqayn la’aanta joogtada ah ee ka timid dhanka xoghayaha joogtada ah.
Yahya Ali Hareeri wuxuu sheegtaa in uu yahay Profesor hasyta sadex PhD, taas oo noqotay mid ay la yaabaan umada Somaaliyeed. Waxaa la sheegaa in uu ka yimi dalka Engriiska UK, sida ay sheegayaan qurba joogta UK waxey leeyihiin waa nin ku lahaan jiray London Dukaan Grocery qaybna lagu iibiyo talefanda. Ayaamahan waxaa dalka Soomaliya kusoo badanaya qurbo joog sheeganeysa shahaadooyin aanan sal iyo raad laheyn. Shaqsi ahaan waxaa lagu tilmaamaa nin aan ku fiicneyn balanta, waa nin shaqo badan laakin aanan raali ka aheyn in ay shaqadu dhaafto xeyndaabka ku wareegsan ,taas oo ah macneheedu wuxuu mar walbo doonayaa in uu maamulu wax walbo oo ka socda wasaarada. Waana nin ku xeeldheer isticmaalida qabiilka asaga oo ku fushanaya danihiisa gaarka ah. Waxaa la sheegaa in uu ku takri fali jiray shaqaalaha iyo hantida qaranka umada Soomaliyeed. Waxaa la xaqiijiyey in hantida qaranka uu u isticmaalo dano gaar ah waxaa la sheegay in uu shaqaale ka mid ah shaqaalaha jaamacada uu ku qaato mushaar asagoo ka dhigaya in ay ka mid yihiin shaqaalaha wasaarada arimaha gudaha. Waxaa kaloo lasoo ogaaday in uu qeyb ka mid ah shaqaalaha wasaarada arimiha gudaha ka goost qayb ka mid ah mushaaraadkooda, khaasatan kuwa ku shaqeeya lataliyayaasha wasaarada.
Wuxuu leeyahay NGO yo uu ku fuliya shaqooyinka wasaarada oo ay dadkale ugu shaqeeyaan mana ogolaanayo NGO aanan kiisa aheyn in uu qabto mashaariicda wasaarada hoosyimaada.
Mashaariicda loogu talo galay wadankoo idil wuxuu kusoo koobay in ay ku soo dhacaan jeebkiisa. Waxaa mahad gaar ah loo jeedinayaa dowlada farmaajo ee u tafaxeydatay in aay shaqada ka fariisiso shaqsiyaadka dhaqanka ka dhigtay ku takri falka umada iyo hantida qaaranka Soomaaliyeed.
Haduu alle idmo waxaan idiin soo gudbin doonaa cadeymo ku saabsan dhagarqabe Yahye Ali Ibrahim.
Source: Ururka Midnimo